के जनकपुरमा पैसा छरेर हिड्ने महिला काेराेना संक्रमित हुन, किन छरियाे पैसा, यस्ताे छ रहस्य — Imandarmedia.com
के जनकपुरमा पैसा छरेर हिड्ने महिला काेराेना संक्रमित हुन, किन छरियाे पैसा, यस्ताे छ रहस्य
जनकपुर। जनकपुरको महावीर चोकमा बिहीबार पैसामा थुक लगाएर फ्याँकेको हल्ला चलेपछि धनुषा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि शनिबार दुई महिलालाई नियन्त्रणमा लियो । यी दुवै महिला इस्लाम धर्माबलम्बी हुन् । पक्राउ परेकी एक महिलाको आरडिटी रिर्पोट पोजेटिभ आएपछि सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायलाई लाञ्छना लगाउने गरी पोस्ट गरिए ।
शनिबार बिहान पनि जनकपुरको रंगभूमि मैदानको पश्चिमी बस्तीमा फेरि पैसा छरेको हल्ला फिँजियो। सुरक्षाकर्मीले त्यो बस्ती घेरेर खोजतलास पनि गरे। प्रदेश २ सरकारको मुख्यालय रहेको जचुकालिकै सामुन्ने आइतबार बिहान पनि पैसा छरिएको हल्ला भयो।
महावीर चोकको घटनामा मुछिएका दुवै महिलाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकमा छन्। श्रीमान्‌ले पठाइदिएको १ लाख रुपैयाँ लिन नातामा नन्द–भाउजू पर्ने दुवै महिला बिहीबार बैंकतिर हिँडेको उनीहरुका आफन्तले बताएका छन्।
प्रहरीलाई उनीहरुले दिएको बयानअनुसार बिहीबार रेमिट बन्द होला भन्ने सोचेर नन्दले १५ हजारको चेक पनि बोकेकी थिइन्, बैंकबाट पैसा निकाल्ने भनेर। नभन्दै रेमिट बन्द थियो। बिदेशबाट आएको रकम उनीहरुले झिक्न पाएनन्। चेक साट्न बैंक पुगे। अजित तिवारी, सन्तोष सिंहले कान्तिपुर दैनिमा समाचार लेखेका छन् ।
बयानअनुसार उनीहरुले १० र २० का खुद्रा नोट पनि लिए। ढक्कीमा तरकारी बेच्ने नन्द–भाउजूलाई चानचुन पैसा आवश्यक परिरहन्छ। बैंकबाट पैसा साटेर महावीर चोक पुग्दा प्रहरीलाई देखेर आफूहरु आत्तिएर दौडिन थालेको उनीहरुले बताएका छन्। त्यही क्रममा चानचुन पैसा खसेको उनीहरुले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्।
‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जानीजानी पैसा छरेको देखिँदैन,’ अनुसन्धानमा खटिएका धनुषा प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘उनीहरुसँगै रहेको पैसा चाहिँ झरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। तर, पैसा आत्तिएर भाग्दा झरेको हो कि नियतवश खसालिएको हो त्यसको अनुसन्धान जारी नै छ।’
ती दुई महिलाले पैसा छरेको भनिएको ठाउँमा रहेको पसलको सटरमुनि समेत एउटा नोट कोचिएको फेला परेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानबाट सटरमुनि अरु नै कुनै मानिसले भ्रम फैलाउन पैसा कोचेको खुलेको बताएको छ। धनुषा प्रहरीले त्यो व्यक्तिको पनि खोजी गरिरहेको छ। ‘पैसा छरिएको आरोप लागेका दुवै महिलाको आर्थिक हैसियत कमजोर छ,’ धनुषा प्रहरीका एसपी रमेश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानले नियतवश नै पैसा छरेको पुष्टि हुँदैन। हामी घटनालाई गम्भीरतापूवर्क अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
पैसा छरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुवै महिलालाई प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। समाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विजय झाका अनुसार उनीहरुको आइतबार बिहान परिक्षणका लागि स्वाब लिइसकिएको र साँझ ६ बजेपछि मात्रै रिपोर्ट आउनेछ। ‘यी महिलाको बारेमा हल्लै बढी भयो,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘स्वाबको रिपोर्ट आएकै छैन। धेरैतिर पोजिटिभ आयो भने प्रचार गरियो।’
धनुषा प्रहरीले महावीर चोकमा पैसा झारिएको बाहेकका घटनालाई ‘अफवाह’ भनेको छ। प्रहरीले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने किसिमले समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नेहरुलाई निगरानीमा राखेको जनाएको छ। पूरै समुदायलाई नै लाञ्छित गरेर समाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने र दुष्प्रचार गर्नेलाई सचेत गराउनुपर्ने मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्तले बताए। ‘समाजिक सद्भाव खलबल हुन नदिन सबैसित परामर्श गरिरहेको छु,’ दत्तले भने। मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसित भेटेरै समाजिक सद्भाव बिथोल्न भइरहेको प्रयास रोक्न आग्रह गरेका थिए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लडिरहेको बेला समाजिक सद्भाव खल्बलाउने कामले कसैको हित नहुने बताएका छन्। कान्तिपुरसँग आइतबार कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कसैले जानीजानी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउने काम गरेको पाइएमा कारबाही गरिने पनि बताए।
‘संक्रमण बढाउने कसैले हर्कत गरेको छ भने प्रहरी–प्रशासनले कडाइका साथ अनुसन्धान र कार्बाही गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘चाहे त्यो जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायको होस्। तर, त्यही निहुँमा समाजिक सद्भाव खल्बलाउने प्रयास गर्नु राम्रो होइन। यसले कसैको हित गर्दैन।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरीको अनुसन्धानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए। ‘समाजमा धेरै किसिमको मानिस हुन्छन्। उनीहरुको स्वार्थ धेरै ठाउँमा जोडिएको हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कोरोना संक्रमण यदि कसैले फैलाउने कोसिस गरेको छ भन्ने त्यो जुनसुकै जाति, धर्म वा सम्प्रदायको भए पनि कानुनभन्दा माथि हुन्न। यस्तोमा धार्मिक स्थलमा रहेकाहरु आफैं अगाडी आएर सहयोग गर्नुपर्छ।’
सम्प्रदायिक कुराले कसैको कल्याण नहुने बताउँदै मुख्मन्त्री राउतले समाजिक सद्भाव बिर्गानुजस्तो खराव काम अरु नभएको बताए। ‘दुनियाँका ताकतवर देश कोरोनाको सामुन्न निरिह बनेका छन्। यो हाम्रो लागि पनि चुनौती नै हो। हामी कहाँ पुग्दैछौं। हाम्रो अर्थतन्त्रको हविगत के हुने हो? त्यता ध्यान नदिएर समाजिक सद्भाव खलबल पार्नु अपराध हो। त्यसैले समाजिक दूरी कायम गरेर सद्भाव पनि सबै मिलेर कायम राख्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने।